Mashandisiro Ekushandisa StumbleUpon uye StumbleUpon Ads | Martech Zone
Mashandisiro Ekushandisa StumbleUpon uye StumbleUpon Ads
Chitatu, December 9, 2015 China, January 7, 2016 Douglas Karr
Zvichida akanyanya kusadzikiswa midhiya enhau uye zvemukati zvekutsvaga saiti yatakawana yekukwezva traffic yeyedu saiti uye vatengi vedu ndizvo StumbleUpon. StumbleUpon ine vanopfuura mamirioni makumi matatu vashandisi. StumbleUpon inopa zvese zviri zviviri mushandisi ruzivo pamwe nebasa rakabhadharwa rekutsvaga, StumbleUpon Ads.
Iyo ipuratifomu yakajairika yekurapa iyo inogadzira kumwe kubatana kwakadzama nevashandisi vayo. Wepakati akagumburwa chikamu chevakadzi maminetsi makumi matatu, maminetsi makumi maviri nemaviri evarume. Muchokwadi, 30% yevatengesi veB22B vanoshandisa StumbleUpon kugovera zvinyorwa zvavo, kusanganisira agency yedu! Iyo infographics isu tinogovana paStumbleUpon inoita zvakanyatsonaka.
Chii chinonzi StumbleUpon?
Vashandisi vanosaina kuStumbleUpon uye, sezvavanotumira, senge, uye vasingade zvemukati, iyo sisitimu inovaka tsika yakayerwa mbiri iyo inopa zvinyorwa zvitsva zvichibva pane zvavanofarira. Iwe unogona kutevera vamwe vashandisi veStumbleUpon kuti uone zvavari kugovana. Uye iwe unogona kuishandisa seyebhukumaki saiti nekuchengetedza yako kutumira kune zvinyorwa.
Pakati pechikuva ibhatani rinogumbura rinoita kuti mushandisi akurumidze kufambira mberi kuburikidza nezvakakurudzirwa zvemukati. Paunonyanya kushandisa StumbleUpon, zvirinani izvo zvinoratidza kuti zvinokupa iwe. StumbleUpon zvakare inopa nharembozha uye piritsi naizvozvowo browser yakawedzera.
Mashandisiro Ekushandisa StumbleUpon
Paunenge iwe wakanyoreswa uye wapinda mukati, StumbleUpon inochengeta yakapfava yekufambisa menyu pamusoro pezviri mukati. Mushandisi anogona kuwedzera bhukimaki kune chinyorwa, kugovera peji nemumwe munhu, kusefa zvido, kusafarira (zvigunwe pasi), se (zvigunwe kumusoro) kana Kugumburwa kurodha unotevera kuwana. Iwe unogona zvakare kuona ruzivo pane iyo saiti saiti uye ndiani akafarira iyo peji.
Chii chinonzi StumbleUpon Kushambadzira?
ne StumbleUpon Ads, vaparidzi vanogona kuendesa zvemukati nekubhadhara kuti izvo zviratidzwe zviratidzwe mukati meStumbleUpon rukova rwezvinhu zvakagadzirirwa mushandisi. Vashambadziri vanogona kunongedza Vanogumburwa nezera, murume kana murume, nzvimbo, mudziyo, pre-akavaka kufarira mabundu kana kusarudza kubva pamusoro mazana mashanu chaiwo zvido zvekutarisa zvikamu. Zvichida chakasarudzika nezveStumbleUpon Ads ndechekuti zvemukati zvako zvinogona kubvisa zvine hukama pamwe nekutarisa kwakabhadharwa - zvichikupa kuoneka kwemari yako kana zvirimo zvichimanikidza zvakakwana.
Kune nzira dzakawanda kwazvo dzemagariro enhau uye iwe unogona kunge usiri kushandisa akanakisa kana kuwana kwakanyanya kuratidzwa. KugumburwaUpon kazhinji kunoshandiswa zvisina tsime sosi yemigwagwa; haina kuzvirumbidza iwo akafanana vhoriyamu yemushandisi sevakomana vakuru - Facebook neTwitter. Ichokwadi ine mamwe mafambiro aunofanirwa kuongorora. Iyi Infographic ichakuratidza mashandisiro aungaita StumbleUpon kutyaira traffic uye kushambadza zvirimo. Cent Muruganandam, Kutiza Kwako kubva pa9 kusvika pa5.
Maererano ne Shareaholic, StumbleUpon inoenderera ichityaira yakawanda traffic kupfuura mamwe mapuratifomu enharaunda. Ramba uchifunga mundangariro maitiro chaiwo ekugumburwa anogona kutyaira kushanya kwakawanda asi nguva pfupi pane saiti uye yakawanda yekubuda, zvakadaro!
Heano akakura infographic kubva Yako Kutiza kubva pa9 kusvika pa5 nehuremu hwakasimba hwekusimudzira StumbleUpon kune yako inotevera yekushambadzira.
Tags: Cent Muruganandammashandisiro ekugumburwashareaholicpasocial media traffic kutumirachigumbusochigumbuso adskugumburwa kushambadzirachigumbuso chekutumira mugovekugumburwa kwekufambiswa kwemigwagwachii chinogumburwaYako Kutiza kubva pa9 kusvika pa5